Kulankii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la filayey inuu berri furmo oo dib u dhac kooban ku yimid. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kulankii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la filayey inuu berri...
Kulankii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la filayey inuu berri furmo oo dib u dhac kooban ku yimid.
Shirkii lagu waday in uu furo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa cawa soo baxaya warar kala duwan, waxaana lagu wadaa in shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la filayey inuu berri subax ka furmo magaalada Muqdisho uu dib u dhac kooban ku yimaado.
Warar hordhac ah ayaa caawa sheegaya in shirkaan bari oo khamiis ah Furmi lahaa uu dib ugu dhacay maalinta Sabtida oo ku beegan 22-ka bishan May.
Sababta keentay arintaan ayaa lagu sheegay in inta badan madaxda maamul gobaleedyada oo dalka ka maqan, taasi oo keeni karta dib u dhac ku yimaada, waxaana lagu wadaa in ay badankood soo gaaraan maalinta berri ah, waxaana suurta-gal ah in maalinka xiga oo Jimcaha ay darteed aanu shirka qabsoomin.
Sidoo kale Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa ah madaxweynaha kaliya ee ku sugan caasimadda isaga oo caawa maqribkii kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, halkaasi oo Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, Xildhibaano ka tirsan labada gole iyo mas’uuliyiin ka socday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Ay si diiran ugu soo dhaweeyeen caawa.
Previous articleMadaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo caawa soo gaaray Muqdisho.
Next articleKu dhawaad 4 kun oo ruux oo 24,kii saac ee lasoo dhaafay xanuunka Karoona ugu geeriyootay dalka Hindiya
Waxaan aniga iyo dhowr musharax oo u taagan xilka Madaxweynaha, Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka, masuuliyiin kale iyo shacab badan ka badbaadnay isku dey dil...
Taliyaha ciidamada Asluubta oo Dusha u saaray Gaari Cabdi Bille ah...
Mucaaradka Tanzania oo kusoo kasoo horjeestay xanibaadyo lagu soo rogey
Doorasho maxaa loo nabii hadii Xigto meesha laga soo buuxinaayo